Ithegi: Intengiso yobudlelwane | Martech Zone
Ithegi: Intengiso yobudlelwane
Iindlela ezili-10 zeMithombo yeendaba kwiNtengiso ye-B2B
NgoMvulo, nge-6 kaDisemba ngo-2010 NgeCawa, Oktobha 19, 2014 Douglas Karr
Nge-Agasti, uSoftchoice wathumela uphando kubathengi babo kwaye wafumana iimpendulo ezili-1,444 ezigqityiweyo ezimele ngaphezulu kwe-1,200 yamashishini amancinci naphakathi (SMB), amashishini, icandelo likarhulumente kunye nemibutho yezemfundo. I-71% yabaphenduli yayikwi-IT kwaye isampulu yayisisiseko se-50 yeepesenti yase-US kunye neepesenti ezingama-50 zemibutho yaseKhanada-ke leyo yayimele ummandla woshishino lwaseNyakatho Melika. Inqaku elinye lenkcazo-ntetho ekufuneka likhwaze kukumelwa kweWordle ngamagqabantshintshi: Ayasebenza
Ividiyo: Isilayidi iBeta siyeza kungekudala!
NgoLwesibini, Juni 17, 2008 NgoLwesibini, Juni 17, 2008 Douglas Karr
Cofa uze ungayiboni ividiyo. Isicatshulwa: Uyibonile iPowerPoint yeMicrosoft. Kodwa awuzange usibone isixhobo esisebenza ngokudibeneyo njenge-Sliderocket-kude kube ngoku. Apha uMitch Grasso, i-CEO kunye nomsunguli, usixelela ngeSliderocket inkampani emva koko asibonise idemo. Isilayidi silungiselela i-beta yoluntu kungekudala, sayina namhlanje.